JIG JIGA. XEELADA GUMEYSIGU KU BAHDILO SHACABKA KA DIBNA DAREEN CABSI IYO ARGAGAX LUGU BEERRO 1884. | ogaden24
JIG JIGA. XEELADA GUMEYSIGU KU BAHDILO SHACABKA KA DIBNA DAREEN CABSI IYO ARGAGAX LUGU BEERRO 1884.
Lancetser house wuxuu ku yaalaa jidka weyn ee soo galla madasha looga arrimiyo dalkan Britain. Guriga Lancaster house waa xaruntii laga maamulayay dalalkii uu Britain soo gumeysan jirray, waa guri ay ku keydsan yihin kumanaan documents oo Africa, Asia ah. 1890 waxaa magaalada Glasgow safar ku tagay Mr James hitman oo ahaa masuul ka soo howl galay guriga lancester house, wuxuu socdaal ku soo maray gobolada shacabka Scotland ee xoriyada u ooman, wuxuuna qiimeyn ku sameynayay suurtagal nimada sidii shacabka Scotland loogu tijaabin lahaa barnaamijka cusub ee lancetster programme.
Barnaamijka Lancetster programme waa barnaamij halis ah isla markaana waajib tahay inn aduunka lugu faafiyo himilada iyo rabitaanka gumeystayaasha, waxay wada shaqeyn lahaa yeen si la mid ah guriga looga arrimiyo dalka France ee ku keydsan sooyaalki taarikhda dalalkii uu soo gumeysan jiray. Dhul iyo shacab lama maamulli karro hadii aysan jirin xeelad cusub iyo qorshe joogta ah si joogitaanka fog loogu hello sabab dadka iyo dhulka lugu sii maamullo. Dalkan Britain wuxuu meel mariyay qorshe dhanka maskaxda iyo aqoonta lugu maamullo dalalka hoos yimaada lancaster programme, balse dalka Frence waxay meel mariyeen qorshe dhanka dhaqanka iyo fasahaadka lugu maamullo dalalka hoos yimaado programme France.
Scotland iyo dalka Haiti waxay ahaayeen deegaanada ugu horeeyay ee lugu tijaabiyay barnaamijka ka dibna waxaa lugu faafiyay aduunka si tartib tartib ah. Hadaba, maxaa ka mid ah barnaamijyada lancetster house ee maanta lugu maamulayo deegaanka somalida ilaa dalka suadi Arabia. Deegaan walba waxaa loo diyaariyay qorshe ka duwan kuwa kale si loo kala mashquuliyo isla markaana aysan xal uggu hellin waxa socda.
– Waa inn dhamaan shacabka jaajuus laga wada dhigaa
– Waa inn talada iyo maamulka goorwalba loo caleemo sarro kuwa ugu dhaqanka iyo anshaxa xun sida abdi ilay
– Waa inn cilmiga laga ilaaliyo inuusan ka bixin xeyndaabka maamullka iyo hogaaminta markaasi joogta
– Waa inn fasahaadka iyo balwada noocyadeeda kala duwan lugu faafiyo dhamaan deegaanka si damiirka iyo asluubta shacabka loo tirtirro, mustaqbalka usoo baxaan shacab dhanka maskaxda iyo dhaqanka ka liita aduunka.
– Waa inn ugaasyada, culumada, wax garadka iyo dumarka, dhamaantood lugu wada sameeyo faraxumeyn jirka ah si aysan u hadlin unna diidan afkaarta gumeysiga.
25 qorshe ee lancester house lugu diyaariyay shirkii Berlin conference 1884 ka dib, Waxaad ogaaneysaa inney jiraan walina sii socdaan meel marrinta iyo faafinta afkaartii gumeysiga balse waxay ku kala duwan yihin jismigga iyo muuqaalka maxaa yeelay waxaa howsha fulin haya waa shaqsiyad kula dhashay oo kula diin ah kula ehel ah meesha markii hore ay ahaayeen dalalka reergalbeedka dad ka socda oo talada iyo maamulka goobta jooga. 25 barnaamij ee lugu diyaariyay lancester house waxaan dul istaagi doonaa mid mid si aynu ufahano waxa maanta socda sida loo sii diyaariyay waqti fog. Dhulka somali galbeed ayeeynu xooga saari ka dibna waxaynu tusaale badan ka keeni doonaa dalalka aduunka ee saameynta ku yeeshay lancester programme.
Abdi ilay howshan uu faraha kula jirro yeeysan la yaab kugu noqonin balse waxaa haboon inaad fahanto xeeladan sida looga bixi karro iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka aduunka barnaamijka ah in shacabka wadda jaajuus laga dhiggo.
Waa taxane Lancaster house 1890 London / by Mujahid.